Ndị ọzọ DPF | Ọrụ nhicha na nrụghachi DPF. Nhicha DPF malitere na .95
Ugbu a ka Index
Ugbu a ka soro
Ọrụ DPF nhicha / mweghachi
Kedu ihe kpatara ndị ọzọ DPF
Ngwongwo nhicha DPF
Usoro ụgbọ mmiri
Akwụkwọ ikike ịrụ ọrụ ndụ
AKW COMKWỌ EPA EGO
DPF Alternatives na-enye OEM mma ikuku, ọrụ bake & mweghachi DPF zuru ezu. Nhọrọ kachasị mma nke America iji mee ka DPF dị ọcha karịa.
Ebe Ọrụ ma ọ bụ Kpọọ maka Quote 833.373.2583 Mgbakwunye: 0
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ndị ọzọ DPF?
DPF Ndi ozo nwere ebe imeghe kwa ọnwa na ndi okacha amara DPF.
Anyị ga-ehicha ma ọ bụ weghachi nke ọ bụla DPF sistemụ na-amasị ọnọdụ ọhụrụ na-ekwe nkwa nsonaazụ na nta nke na-eri ọhụrụ. Na mgbakwunye na ọrụ DPF anyị, anyị na-enyekwa DOC (Diesel Oxidation mkpali), SCR (Nhọrọ Mbelata Nhọrọ) na EGR (Iyuzucha Gas Recirculation) nhicha na mweghachi. 833.737.2583 Mgbakwunye: 0
Akara 1, aha 1, otu ọrụ, otu akụrụngwa = nkwekọ na ọrụ na ogo mba niile
24hr ruo 48hr ntụgharị
Nbudata na nnyefe n'efu
Nkwa ekwere ma ọ bụ na ị kwụghị
Nkwa ekwere na-azọpụta ọtụtụ narị, puku, ma ọ bụ nde na Mgbanwe DPF. Na 3mo, 6mo, 1yr, na nhọrọ akwụkwọ ikike ndụ niile dị. Bịa enweta ihe dị iche. Anyị bụ ndị America nhọrọ kasị mma maka DPF nhicha na mweghachi. 833.737.2583 Mgbakwunye
Gịnị kpatara nhicha DPF (Diesel Particulate Filter) ji dị mkpa?
Ihicha na idozi DPF nke ọma oge 1 ga - egbochi gị ịda mba na oke ego na achọghị. Ugbu a karịa mgbe ọ bụla, ọ bụrụ na ijide sistemụ DPF n'ụzọ ziri ezi, ị ga - enwe ike izere ọdịda dị egwu site na $ 10,000 ruo $ 30,000. Ọ dịghị egwuregwu. Abụla onye a. N'ebe a na DPF ndị ọzọ akụrụngwa anyị, usoro anyị, yana ihe ngwọta SL100 ga-eweghachi DPF na ụdị OEM. Akwụkwọ ikike anyị enweghị atụ na nke kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị ga-azọpụta gị na-enwe nnọọ njọ DPF ụbọchị. 833.737.2583 Mgbakwunye
Gini mere DOC (Diesel Oxidation Catalyst) ji di ocha?
DOC (Diesel Oxidation Catalyst) dị oke mkpa iji rụọ ọrụ DPF kwesịrị ekwesị. Ọ na-anọdụ ala n'elu DPF. Ọ bụrụ na anaghị arụ ọrụ ya nke ọma n'otu oge dịka DPF- ọ nwere ike ịtinye DPF n'egbughị oge. Complicatedda dị mgbagwoju anya? Kwe ka anyị kọwaa. Ọ bụrụ na DOC nwere nchịkọta soot ma ị wụnye DPF ọhụrụ ma ọ bụ DPF dị ọcha maka nke ahụ, nke abụọ ị ga-amalite engine niile nke soot sitere na DOC ga-abanye kpọmkwem na DPF nke ga-eme ka DPF kwụghachi azụ. Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara na ụlọ ọrụ a na ndị ahịa na-ahụ ọkụ ọkụ ọkụ, ike gwụ ike, yana ụgwọ ndị ọzọ obere oge mgbe nnọchi DPF ma ọ bụ ọrụ gasịrị. Ọ bụ nnukwu isi ọwụwa maka anyị niile! Kwe m. I gaghi agbanwe akwa nwa ya ma kpochapu ya n’azu? Enweghị m olileanya. Ehichala, weghachite, ma ọ bụ dochie DPF n’emezighị DOC. Weta DPF na DOC ma anyị ga - ahụ na edoghachitere ha na ụdịdị OEM. 833.737.2583 Mgbakwunye
Kedu ihe kpatara SCR (Nhọrọ Mwepu Mmasị) ji dị ọcha?
Nke a bụ aghụghọ. SCR (Nhọrọ Mwepu Nhọrọ) na-akpata nsogbu siri ike na mba niile. Ndị nwe ego na-efu ego ruru ọtụtụ ijeri dollar na nyocha na SCR dochie. SCR nọdụrụ na DPF. Na-emekarị usoro ọgwụgwọ mgbe emesịrị dị ka ndị a: DOC, DPF na SCR. Ruo oge ụfọdụ ugbu a ruo taa, ndị mmadụ na-ekwu, “I nweghị ike ihicha SCR”. Anyị agaghị ekwu na ha mehiere ma anyị agaghị ekwu na anyị ziri ezi. Ihe anyị ga - ekwu bụ na - anyị ejirila ọtụtụ puku usoro SCR rụọ ọrụ nke nwere nnukwu ọganiihu gụnyere sistemu Detroit 1box. Ọbụghị naanị na usoro anyị nwere ike wepu kristal DEF kristal na-egbochi nkesa kwesịrị ekwesị nke ikuku gas (yabụ na-enyere ndị na-eme ihe aka belata (NOX) ka ọ dị nso na efu site na ọdụ ọdụ) anyị nwere ike ịme ya na-enweghị emerụ Catalyst ahụ n'onwe ya. Tupu ị dochie SCR maka $ 5,000 ma ọ bụ karịa nye anyị oku. Anyị ga-eweghachi ya OEM spec ma ọ bụ na ị naghị akwụ ụgwọ. 833.737.2583 Mgbakwunye
DPF Systems anyị na-arụ ọrụ:
Cummins DPF, Volvo DPF, Mac DPF, Detroit DPF, Ford DPF, Dodge DPF, Duramax DPF, Kubota DPF, John Deer DPF, Caterpillar DPF, Hino DPF, Isuzu DPF, Huss DPF, Perkins DPF, Komatsu DPF, VW DPF, BMW DPF, Mercedes DPF, JCB DPF, Hatz DPF, Doosan DPF, Roadwarrior DPF, Skyline DPF, Dinex DPF, DPF Durafit, Maxfilter DPF
Ahụghị DPF gị? Anyị ka na-ehicha ya. 833.737.2583 Mgbakwunye
Ọrụ anyị na-ejere:
Mining DPF, DPF Construction, Agriculture DPF, Transit DPF, OTR DPF, Onye njem maka ìhè / ọkara na nnukwu ọrụ DPF. Ahụghị ụlọ ọrụ gị? Anyị ka na-ejere ya ozi. Kpọọ maka nkwuputa. 833.373.2583 Mgbakwunye
~ Gbaa Cleaner Longer ™ ~
Gụọ ihe ndị ahịa anyị na-ekwu banyere anyị :
Ọrụ Dị Ukwuu Aka
“Ihe m ga-ekwu bụ WOW. Kemgbe anyị malitere iji DPF Alternatives, anyị na-echekwa ma na-agbakwunye na ala anyị. Ọnụ ọnụahịa ndị ọzọ nke DPF kachasị mma, gbakwunye ma bulie - naanị ọrụ ịtụnanya dị ala. Anyị ga-eme ka ihe niile mara banyere gị na gị unmatched ọrụ. Daalụ ọzọ."
“DPF ọzọ na-agbanwe egwuregwu na DPF nyo nhicha. Apụghị m inwe obi ụtọ karị. M nwere 12 isx niile na nzacha. Flegbọ mmiri m si na Atlanta na DPF Alternatives na Commerce City, Colorado ga - enweta nhicha m niile ka gwongworo m na - aga site na Colorado. Agaghị m alaghachi n'ụdị nhicha m na-ebibu. ”
Tgbọ M Na-agba Ọsọ !!!
“Enwere m Ford F2008 nke 350. DPF kwadoro ya. Agwara m ya na onye na-ere ahịa, mgbe ha chere otu izu, ha dọkpụrụ m gwongworo. Ha gwara m na onye na-egwu egwu m gbawara ma chọọ ngbanwe, tinyekwara DPF ma chọọ ka edochie ya. Ndi na-efu m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 4K n'ọnụ ụzọ. Amalitere m n'ịntanetị ma nyochaa nhọrọ m. Ogologo akụkọ dị mkpirikpi, ọ kpochara DPF m, ọ kpochara ihe ndozi m - otu nke onye na-ere ahịa kwuru na ọ gbawara ma chọọ ka edochie ya. Anọ m n'ọnụ ụzọ dị n'okpuru $ 1000 ọbụlagodi na ụfọdụ mgbakwunye m mere ha. Ugbo ala m na-agba oso !!! ”
Seramiki Dị Ka Ọhụrụ
“Ekwesịrị m ikweta, m bụ obere obi abụọ banyere gị ultrasonic dizel particulate Myọcha nhicha nhọrọ. Ma mgbe ọ gwụchara ya, enweghị m ike inwe obi ụtọ karịa. Enwetụbeghị mgbe DPF laghachiri nke a dị ọcha, seramiiki dị ka nke ọhụrụ, dịka ị kwuru. Kemgbe anyị malitere iji ọrụ gị, gwongworo anyị anaghị arụ ọrụ nke ukwuu ma ọ dịla ogologo karịa ihe nhicha mbụ m na-eme. Daalụ ọzọ."
Ebe ọrụ & mmeghe ọ bụla kwa ọnwa
DPF ALTERNATIVES FRANCHISE ohere
Ndị ọzọ DPF nwere ohere ị nweta aha ikike nwere ọtụtụ ahịa na-ere ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịbanye n'ahịa siri ike, na ahịa na-eto ngwa ngwa, ndị ezinụlọ DPF ndị ọzọ na-achọkarị ndị otu egwuregwu chọrọ ịme ihe dị iche.
Ndị nwere ụlọ ahịa Dizel na-arụzigharị ọrụ zuru ezu- lee ma ị tozuru ịnata akụrụngwa anyị na-enweghị ego.
Kpọtụrụ onye na-elekọta anyị, Chris Burrei na (435) 817-3828.
Nhicha DPF nke Ultrasonic = Ngwọta Nri Ọcha
State-Of-The-Art DPF Nhicha akụrụngwa
Ndị ọzọ bụ DPF bụ ndị na-eweta Parts Aftertreamtment
Debe ụgbọ mmiri n'okpuru mmefu ego
Ndị ọzọ DPF : A Cleaner Echi
Vehiclegbọ gị Diesel particulate Myọcha na-enyere aka ichekwa gburugburu ebe obibi anyị, yana ihe nhicha anyị Ultrasonic DPF nhicha na-echebe obere akpa gị. Anyị ultrasonic DPF nhicha Service bụ nanị pụtara usoro nke ọma nhicha ọ bụla cell na DPF-amasị ọhụrụ ọnọdụ. Usoro nhicha DPF ndị ọzọ na-ebelata ụgwọ site na ịgbatị ndụ bara uru nke nzacha gị. Anyị nwere obi ike na teknụzụ anyị, anyị na-enye ndị ahịa anyị nsogbu, ụlọ ọrụ na-eduga, nkwa arụmọrụ otu afọ.
Usoro nhicha anyị dị elu na-eweghachite akụrụngwa na nkọwa OE; na-ekwusi ike na akụ na ụba mmanụ na ndụ bara uru site na nyo DPF ọ bụla. Anyị pụtara Ultrasonic ihicha usoro utilizes proprietary elu ugboro ụda ebili mmiri na ọtụtụ nde impulses kwa abụọ imebi wuru-elu soot na uyi. Ihe ngwọta anyị pụrụ iche na-ewepụsị ahụ ma na-egbochi ha ịlaghachi na mgbidi cell. Ndị ọzọ DPF na-enye ọrụ nhicha DPF dị elu dị ka ihe ọzọ maka mgbanwe OEM dị oke ọnụ.
- Nhicha akụrụngwa iji mee ka DPF dị ọcha karịa -
Ndụ nkwa na eletriki mmiri: 100% Ego maka ruru eru Buyers
Akụrụngwa Ngwugwu ngwugwu site na ala rue elu. Nchịkọta niile ga - enyere gị aka iweghachite DPF na nso ọnọdụ ọhụrụ. Kpọọ maka nkọwa 833.737.2583 Mgbakwunye
Ntinye nbanye na ngwugwu achicha $ 10,500.00
Nchịkọta Mweghachi zuru ezu • $ 41,447.90 • $ 43,447.90 • $ 43,693.15 • $ 54,662.90*kasị Popular • $ 67,187.00 • $ 75,761.00 • $ 96,810.90
Mụta Banyere DPF ndị ọzọ na-ehicha & Mweghachi
Ndị ọzọ DPF
Right Copyright - DPF Ndi ozo